We She Me: သြော်ဇီ PR အတွက် Agent လိုသလား
MrDBA - 9/24/08, 11:34 PM
ကျွန်တော် လာဖတ်သွားတယ် ကိုအန်ဒီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Sai Tun - 9/25/08, 12:25 AM
ပတ်ပတ် စက်စက်ကို အသုံးဝင်တဲ. ပို.လေးပါ
Anonymous - 9/25/08, 12:41 AM
မိန်းမပိုးနည်း ရေးပါဦးဗျို့ :-)
TZA - 9/25/08, 2:14 AM
ဖတ်သွားတယ်ဗျ၊ ဩော်ဇီသွားတော့သွားချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပျင်းမှာလည်းစိုးတယ်၊ ဩော်၊ မုန့်ဆီကြော်၊ မုန့်ဆီကြော်။
ဇနိ - 9/25/08, 2:23 AM
ကျနော်လည်း ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ ..
ဒီမှာလည်း တီဇက်အေ ကို သဘောကျလို့ နှုတ်ခမ်းနာ...နှုတ်ခမ်းနာ.. လို့ပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်။
Kay - 9/25/08, 2:32 AM
တင်ပြ ထားပုံကတော့.. အပျံစားပဲ။ သိချင်သူများ အတွက်..ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ နော။
PTi - 9/25/08, 2:46 AM
မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ။ အခုတော့ မလိုသေးပေမယ့် နောက်တော့လိုလာမှာပါ.. နောက်ပြီး မေးတဲ့လူရှိရင်လည်း ညွှန်းလို့ရတာပေါ့...
Moe Cho Thinn - 9/25/08, 7:50 AM
ဖတ်ရတာ အင်မတန် ရှင်းတယ်။
အမလဲ သြော်ဇီကို ရောက်ဖူးချင်တယ်။ ရှေ့က TZA နဲ့ ကိုဇနိ က မုန့်ဆီကြော်နဲ့ နှုတ်ခမ်းနာ လို့ ရွတ်သွားတော့ အမကျတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ပေါ့နော်။
Republic - 9/25/08, 7:59 AM
တော်တော် လေးကို ပြည့်စုံပါတယ် ၊၊ ကျေးဇူးပါ ၊၊ သိချင်သူများကို ဝေမျှလို့ရအောင် print out လုပ်ပြီးလည်း သိမ်းထားပါ့မယ်ဗျာ ၊၊
Aung Myo Htet - 9/26/08, 9:36 PM
It depends onaprofession. For IT, it's easy and ACS is very generous in assessing applicants. But other professions such as trades people - Builder, plumber, electricians, teachers are assessed differently by their respective Assessment organisations. For them, experienced Agent is very important as the presentation is vital to get the skill assessed successfully. For immigration form filling and posting, agent is not required.
Anonymous - 9/27/08, 2:06 PM
မြန်မာတွေ ပွဲစားကိုပဲ အကုန်ပေးလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကတော့ အတော်လေး ဖျောက်ရခက်နေသလိုပဲ ။ အဲဒီတော့လည်း စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းလျှောက် ဖောင်ဖြည့် တင်ပေးတာလေးကိုပဲ ပိုက်ဆံယူလုပ်နေတဲ့ ပွဲစားတွေ ပေါ်လာတာပေါ့ ။
Demand ရှိလို့ supply ဖြစ်လာတယ်ခေါ်ရမယ် ။ ပွဲစားဆိုတာရှိတာ တချို့ နေရာတွေ အသုံးဝင်ပေမယ့် အရမ်း သူတို့ကိုပဲ မှီခိုလွန်းရင် လူတယောက်ရဲ့ ရှာ၂ဖွေ၂ နှံ့၂ စပ်၂ လုပ်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ၊ ဘ၀မှာ ရနိုင်တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ နည်းသွားနိုင်တယ် ။
ခုဆို ကိုအန်ဒီတို့ဆို ကိုယ့်ဘာသာလုပ်တော့ အကုန်လုံး ပြန်ပြီးပြောနိုင်တယ်လေ ။ ဒါကလည်း အတွေ့ အကြုံတခုပဲ ။ ကျမကတော့ မြန်မာတွေ ပွဲစားဆိုတာတွေအပေါ် သိပ်အားကိုးတာတွေ မကြိုက်ဘူး ။ ကျမ မေမေ့ကို ပြောလေ့အမြဲရှိတဲ့စကားက .... ကားပွဲစားဆိုတာနဲ့ တမိသားစုလုံးကို ထိုင်ကျွေးထားနိုင်တာ မြန်မာပြည်မှာပဲ ရှိမယ် ထင်တယ်လို့ ။
Anonymous - 9/27/08, 2:54 PM
Andy Myint - 9/28/08, 5:36 PM
အားပေးတာ ကျေးဇူး Mr.DBA
ပက်ပက်စက်စက်ကို အသုံးချပေတော့ ကိုစိုင်းထွန်း
အွန်... မိန်းမ ပိုးနည်းအတွက် Agent လိုလို့လား စာဖတ်သူရဲ့။ ကျွန်တော်က အင်မတန် ညံ့တဲ့သူနော်။ တကယ်ပြောတာ။
မပူနဲ့ ကိုTZA။ အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးနဲ့ဆို ပျင်းဖို့တောင် အချိန်မရတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ သြော်ဇီမှာ မပျင်းချင်ရင် ...... ဒန်တန့်တန်...
ဟုတ်ပ ကိုဇနိရေ နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါမလား မသိဘူး။
မကေက အတော်ရေးပြီး သွားပြီ ဆိုတော့ သိပ်ရေးစရာ မလိုတော့ဘူးလေ.. ဟဲဟဲ
ကျေးဇူး ကိုပီတိ။ စိတ်ထားလေးကို သဘောကျသွားပြီ။ လိုတဲ့ သူတွေကို ညွှန်ပေးတာဆိုတာကို။
သြော်ဇီကို ခဏလာလည်ပေါ့ မချိုသင်း။ Vacation ပေါ။ ဟဲဟဲ
ကောင်းပါတယ် Republic။ ထပ်ပြီး မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thanks for completement, Aung Myo Htet. Most people asking to write this post are from IT field.
ဟုတ်တယ် ဂျစ်ရေ။ ပွဲစားဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ အများသား။ ဘာလုပ်လုပ် ပွဲစားရှိတယ်။ စနစ်ကြီးကပဲ ဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်သလား။ လူတွေကပဲ စနစ်ကြီးကို ပိုပျက်အောင်၊ (၀ါ) ပျက်နေတဲ့ စနစ်ကို မပြင်ဘဲ မှီခို စားပေါက် ထွင်ကြသလားပဲ။
ဆေးစစ်ရင် သူတို့ ညွှန်ကြားတဲ့ ဆီမှ စစ်ရတယ် စာဖတ်သူ။ ဘာတွေ စစ်ရမယ်ဆိုတာ အဲဒီထဲမှာ ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ မျက်လုံး စစ်တယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်တယ်။ သွေးဖောက်တယ်။ ပေါင်ချိန်တယ်။ HIV နဲ့ TB စစ်တာ ဖြစ်မယ်။ အမျိုးသမီးကတော့ ဗိုက်ကြီးနေလို့ အသည်းရောင် ဘီပါ စစ်ရတယ်။
Anonymous - 9/29/08, 2:11 AM
ဘီက မစစ်မနေရလား ဗျ....စီရော...
KYAW KYAW - 9/30/08, 4:16 PM
Hi Ko Andy Myint,
Thanks for ur contribution abt Australia's PR for Burmese ppl.
I am only S PR and would like to more abt PR in West like US, Canada n Europe if u had time.
Pls let me know ur email address if u don't mind.
Andy Myint - 10/1/08, 8:21 AM
ကျွန်တော်တို့ တုန်းကတော့ အသည်းရောင် B က ကိုယ်ဝန်သည်ပဲ စစ်ရတယ်။ ကျွန်တော်က မစစ်ရဘူး။ C ကတော့ လုံးဝ မစစ်ရဘူး။ အခု Rules & Regulations တွေ ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ် စာဖတ်သူ။
Hi Kyaw Kyaw Oo, my gmail is just as my name. No dot. No underscore. All in one word.
KYAW KYAW - 10/1/08, 5:08 PM
is it gmail ot yahoo ?
if it were yahoo then yahoo.com or yahoo.com.au
Anonymous - 12/6/08, 3:18 PM
Thanks for your contribution. I wish to know about some in qualifying of assessment. Frankly, I have applied for that assessment. I am wondering about required experience. It is written as the requirement is4yrs. But I got about only2yrs. How about for the reference? As you know, the sg employer are really difficult to get reference from them. How that ACS check for the reference? means, via email or phone call? I could not provide reference for one of my former employer. could that be harm for their determination? cheers mate.
Anonymous - 8/12/09, 5:59 PM
My name is Nay. I am working in U.A.E for2years asawaiter at five star hotel named Le meridien. I would lik to know how could i join to austrilia? Like job or student? If i apply for college , how much i have to pay for my 1 year semister and what are the qualification to apply student visa. Honestly i am poor person that why i am working in abroad. So i dont have so much of money in bank account to show. And can I apply tution grant. Whatever the way i can join to the austrilia, Please give me the suggestion..
Anonymous - 8/28/09, 6:51 PM
ကိုနေ ..ကိုနေ ရဲ့ မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘလော့ ဂါ မဖြေခင် ကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်ရှယ် ပေးမယ် ...အော် ဇီ ကို ကျောင်းသားအနေနဲ့သွားချင်ရင် . ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ကျောင်းကိုလျောက်
၇ပါတယ် ..အဲဒိမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အင်းဂလိပ်စာဟာ ကိုယ့် ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက် အင်းဂလ်ိပ်စာ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်တွေ ပြရပါတယ် ..ဘာတွေလဲဆိုတော့IELTS (or) TOEFL ဆိုတာတွေ ကြို့ပရပါမယ့် ...ကိုတက်မယ့် ဘာသာရပ်ပေါ်မှုတည်ပြီးကျောင်းတွေ က အင်းဂလိပ်စာကို အမှတ်တောင်းပါတယ်..ဥပမာ ..သက်မွေးပညာ ကျောင်းဆိုရင် အနဲဆုး IELTS 5.5 TOELF 500 လောက်၇ှိ၇ပါမယ်..စက်မှူလက်မှူကျောင်းနဲ့ ဆေးလိုင်းတွေ ဆိုရင်တော့ ပိုမြင့်တာပေါ့လေ .
ကျောင်းက လက်ခံတဲ့အခါ အဲဒိလက်ခံတဲ့ စာနဲ့ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ ကိုယူပြီးတော့ အော်ဇီသံရုံးမှာ .ဗီဇာလျောက်ရမယ်လေ...ဗီဇာလျောက်တဲ့အခါ သံရုံးရဲ့ အဓိက လိုချင်တဲ့ အချက် (အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံ ဖို့လိုပါတယ်)က သူတို့နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်ရအောင် ကိုယ့်မှာ ငွေ ကြေးပြည့်စုံရဲ့လားဆိုတာပါ ဘဲ ..နောက်တခုက သင်ယူနိုင်လောက်အောင် အင်းဂလိပ်လိုပြောတတ်ရဲ့လားဆိုတာပါ...ဟိုးအရင် ၁၉၉၆ ။ ၉၇ လောက်က ကျွန်တော် စင်ကာပူမှာတုံးက aussi TAFE မှာတက်ဘို့လျောက်ဘူးတယ် ဒါ ပေမယ့် စင်ကာပူမှာရှိတံ အော်ဇိသံရုံးက မြန်မာပြည်မှာ အော်ဇိ သံရုံးရှိတဲ့အတွက် အဲဒိကနေ လျောက်ပါ ဆိုလို့ ပြန်လျောက်ခဲ့၇တယ် ...ဒါပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး သူတို့အကြောင်းပြချက်က ကျွှန်တော့် မှာ ကျောင်းတက်နေတု့းံ ထောက်ပံ့ မယ့်သူမရှိလို့ တဲ့ ( ဒါတောင် ကျွန်တော် ဘဏ်စာရင်းကို သေချာလုပ်လိုက်နိုင်သေးတယ် ) အဖေအမေက အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ ဆိုတော့ .ဒါ လဲပါတယ်....အလုပ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ထုံး စံအတိုင်း သူတို့နိုင်ငံသားတွေ မလုပ်ချင် မလုပ်နိုင်တဲ့3Ds ..တွေ တော့ရှိပါတယ် ဒါ က တော့ ရိုးရိုးဝန်ထမ်းအလုပ်သမားအနေနဲ့သွားချင်ရင်ပေါ့ ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြိးတော့ထမင်းချက်အလုပ်ကတော့ အတော်လေး ရနိုင်ပေမယ့် ပြီးခဲ့နှစ်က စလို့ သူလဲ IELTS အနဲဆုံး ၅.0 တောင်းလို့ ကအခုကျွန်တော်တောင်ဖြေထားရတယ် ....့ပီအာ တိုက်ရိုက်လျောက်ချင်ရင်တော့ ဒိ ဘလော့လေးက အတော်စုံပါတယ်...အဓိက တော့ IELTS ကို ၆.၀လောက်၇ှိတာကောင်းတယ်ဗျ...ကျွန်တော်လဲ ကိုနေ လိုဘဲ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းပါ ...(ချက်ကြိးပေါ့ ဗျာ) ကိုယ့်ဘက် က ရှိရမယ့်ဟာလေးတွေ တော့ ရှိထားသင့်တာ အကောင်းဆုံးပါ ..အဆင်ပြေမှာပါ ......
ရွှေပြည်သူ - 9/23/09, 11:50 PM
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်မိပါတယ် အစ်ကို။ အခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြပေးထားတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Anonymous - 1/25/10, 9:11 PM
For working experience is at least4years right ?
that need to be consecutive?
Andy Myint - 1/26/10, 10:16 PM
It depends on the profession. For IT, it was4years for me.. not sure for now.. have to check the web site.
Nyan - 2/9/10, 2:58 AM
Could you show me the sample of CBOK and2Reports?
I heard that there isanew rule that MODL was revoked from the point test. I amalittle bit confused here, is that immediately affected or it will only be affectd on mid of 2010?
Anonymous - 8/5/10, 6:21 PM
Thank for sharing your experience. I haveafew point to clarify regarding to AU VISA.
My wife going to study PhD on AU and her student VISA Sub Class 574 will be granted soon. I also applied student dependent visa together her.
If I granted student dependent visa sub class 574, I found that there is permission to work for Student Dependent. For Sub Class 574, there is mentioned as follow:
I am so clear about that statement for unlimited work.
Is that mean student dependent of Sub Class 574 can work full time job?
Please help to answer if you have any idea about this.
aungsan - 5/20/11, 5:13 AM
Thanksalot for the info..and It really valuable to me since I'm going to apply Aussie PR when I finish my Australian Engineering Degree in Sg.Keep it up bro!!!
YE LIN Oo - 3/24/13, 6:09 AM
We would like to know more updated information for Ausi PR, so can you give ur email address?